HEXAGON 2019 Akụkọ - Geofumadas
Akụkọ nke HEXAGON 2019
Hexagon kwupụtara nkà na ụzụ ọhụrụ ma ghọtara na ndị ọrụ ya na HxGN LIVE 2019, nzukọ ya zuru ụwa ọnụ nke ngwọta dijitalụ. Njikọ nke ngwọta ndị a na-agbakọta na Hexagon AB, bụ nke nwere ọnọdụ dị mma na ihe mmetụta, ngwanrọ na teknụzụ kwadoro, haziri nkwurịta okwu nkà na ụzụ nke anọ na Ven Venian na Las Vegas, Nevada, USA. UU HxGN LIVE ebe o zukọtara ọtụtụ puku ndị ahịa ahịa Hexagon, ndị ọkachamara na ndị ọkachamara na nkà na ụzụ gburugburu ụwa.
Ihe omume ahụ malitere site na ngosi nke Ola Rollén, Onye isi ala na CEO nke Hexagon, isiokwu ya bụ "data gị nwere ike ịchekwa ụwa."
"Hexagon nwere ọhụụ dị ike iji tinye data ahụ n'ọrụ ma gbanwee omume usoro mkpofu akụ na ụba nke ala ndị mebiri emebi," ka Rollén kwuru. Site na iwusi obi odi n'ihu nke ga - adi nma, uzo anyi si eme “ka anyi mee ihe oma” ga - eme ka akwagide ya ghara iru oru, nchedo nke oma, imeputa ihe na adighi ala, otu ahia ahu di ka ndi ahia anyi. achọ ».
Ndị isi nke ụlọ ọrụ azụmahịa nke Hexagon kwupụtara ọkwa ọhụrụ ngwaahịa na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ n'oge mmemme kachasị na Wednesday na 12 na June. N'oge ihe omume ahụ, ndị mmeri nke onyinye afọ a, gosipụtara mmụọ nke ọhụrụ, mmekọrịta na nkà na ụzụ na-enwe ọganihu site na mmetụta nke azụmahịa ha, ọrụ ha na-eje ozi na mpaghara na ụwa.
N'oge a, a na-asọpụrụ ha na ezi omume ha:
Apex.AI: Mgbasawanye nke nkà na ụzụ ụgbọ ala kwadoro. Iji nweta ahịa ndị na-ahụ anya, dịka iwu, ịmepụta na ihe ndị ọzọ.
Beijing Benz Automotive Co., Ltd. (BBAC): Ha na-arụ ọrụ ịmepụta usoro ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi maka ịmepụta ụgbọala.
Bombardier Aerospace: Mee usoro mgbakọ dị ọcha, nke kwadoro components site na njedebe ndị dị egwu
Akwukwo ndi ozo di na Canada: Ọrụ nkwado na-eme ka ndụ na ahụ ike na akụ na ụba dị na obodo ebe anyị na-arụ ọrụ
Censeo: Jiri georadar ka ịmepụta ụzọ nyocha ndị na-adighi ike
Corbins Eletriki: Mepụta na ịkekọrịta ọrụ kachasị mma, ọ bụghị naanị maka ụlọ ọrụ mana maka ụlọ ọrụ ahụ dum
Ọrụ ndị uwe ojii CP: Ha na-ekwe nkwa na otu n'ime ụgbọ okporo ígwè kasị dịrị nchebe kachasị mma na North America.
Ugboro ugboro: Mee ihe ngwọta iji mee ka ọnọdụ-ọmụma dị omimi dị na òtù niile
Fresnillo: Ha na-emepụta otu ụlọ ọrụ nkà na ụzụ na-arụ ọrụ maka atụmatụ m, arụmọrụ, azụmahịa, nnyocha na nlekota oru.
"Ndị ahịa anyị bụ ndị nnọchi nke mgbanwe na ịba ụba ike, anyị nwekwara obi ụtọ ịsọpụrụ asọpụrụ nke afọ a maka onyinye ha na-eweta ọhụrụ," Rollén kwuru. "Akụkọ ha na-akpali anyị niile na Hexagon."
FTI na-ekwupụta mmepe nke 2019 Feature Pack 1 FormingSu
Akpụ Technologies (FTI), na-eduga na ụlọ ọrụ ngwọta maka imewe, ịme anwansị, atụmatụ na-efu nke mpempe akwụkwọ metal mmiri Mmepụta, mara ọkwa n'ụwa nile egbe nke FormingSuite 2019 1 Njirimara Pack. Ezubere maka na-eri estimators, imewe engineer, ngwá ọrụ ndị na-emepụta na injinia di elu na-eme atụmatụ na akpakanamde, aerospace, n'ji ngwaahịa na ngwá electronic, nke a mma mkpọ nwere ọtụtụ oganihu ekwe nkwa nke kacha mma mma na-arụpụta na arụmọrụ niile ndị ọrụ.
Mgbanwe n'ozuzu na ụlọ ọrụ ọrụ na usoro ngwanrọ na-ekwe ka atụmatụ nke ihe eji eme ihe (MUL) na Kere maka Nchụpụta (DFM) ka emezuchaa. Ndị a echiche aka ahịa belata ihe onwunwe n'efu site virtual ule na-eji dochie akàrà ule na formability idozi nsogbu na pụrụ iyi ya egwu ike n'ezi ihe nke a mpempe ogologo oge tupu ndị ibe esịmde n'ala. Usoro ọhụrụ nke blanking na ngwanrọ ha na-ekwe ka ndị ọzọ gaa na akwu ma mepụta ngwa ngwa, na ọtụtụ ihe na-adịghị ala karịa tupu mgbe ahụ, mgbe ị na-atụle ọtụtụ ihe na nhazi usoro. Mgbanwe na oghere ụgbọelu na njirimara nke mgbakwunye jikọtara ngwọta nke ụwa na usoro dijitalụ, ikwe ka nkenke dị oke na akụkụ siri ike na arụmọrụ.
Site na nsonaazụ ọhụrụ a, usoro nke ProcessPlanner nke FormingSite na-aga n'ihu ịkwado nkwado maka usoro ndị kachasị dị na nhazi nke mpempe akwụkwọ. Ụlọ ọrụ ahụ Atụmatụ Ntanetị ugbu a na-enye ohere ka ndị ọrụ nyochaa nhichapụ nchịkọta n'ime arụmọrụ dị iche iche (ma na netwọk na nke offline). Ọhụụ ọhụrụ a na-eme ka nkọwa nlezianya nke usoro mmechi ahụ dị mma, nakwa dị ka ihe nrịba matrik ahụ, ọnụahịa nke matriks, nha nke matriks na nkọwa nke arọ nke matriks. Nhọrọ ọhụrụ maka ịkọ ọnụahịa nke cam ahụ na-eme ka mgbanwe dịkwuo mfe, nyekwuo ezi atụmatụ maka cams ndị a haziri ahazi, na ọkọlọtọ maka matrices ọganihu na matrices. N'ịgbanwe mgbanwe ndị a na tebụl ọrụ a, nhọrọ ngosi ọhụụ na ProgDie Process nchịkọta nchịkọta na-egosi ọnụọgụ nke ịnwụ na nhazi usoro.
Usoro nchịkọta nke COSTOPTIMIZER na-eweta mmelite dị ukwuu n'ọsọ nke mkpebi nkwụsị, nakwa dịka nhọrọ ngosi abụọ ọhụụ iji gosipụta ọnọdụ nke onye na-ebu ya yana akụkụ 3D yana atụmatụ. Ntucha njirimara nke nesting designs now allows users to choose whether piece is trimmed while maintaining appendage compensation, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ihe odide na-ebipụ na-enweghị na-emetụta akụkụ. Ngbanwe a, na-enye ndị ọrụ ngwá ọrụ ndị dị mkpa iji nyochaa nke ọma ohere ịnweta ohere nke ihe ndị dị na mpempe akwụkwọ ndị e ji ederede. Ịmụbawanye ikike dị iche iche nke FormingSuite ịmebata na nyochaa ọdịdị nke netwọk na nkwado; Ngwaọrụ ụgbọelu na-enye ugbu a nhọrọ nke ịgbakwunye ihe gbasara oghere pilot, dị ka ọ dị na nkwekọ nke ụwa. Nke a na-enye ndị ọrụ injinia aka iji hụ na iguzosi ike n'ezi ihe nke atụmatụ ha dị na ngwanrọ na n'ọmụmụ ihe.
N'ikpeazụ, e mewo mmelite dị ịrịba ama ka ị belata na FastIncremental. Mgbanwe nlekota nke ncha n'oge trimming na-eme ka o doo anya na nsonaazụ nke arụpụta ihe ziri ezi. Mgbochi akpaaka ugbu a na-enye ngwọta ngwa ngwa na nkwugharị ziri ezi karị.
Michael Gallagher, Onye isi ala na Onye isi FTI kwuru, "Obi dị anyị ezigbo ụtọ ikwuwapụta ntọhapụ anyị kachasị ọhụrụ na HxGN LIVE 2019, na afọ a. "Otu n'ime ụkpụrụ kachasị dị na ngwanrọ anyị bụ ịkwalite ojiji nke ihe, nke ọ bụghị naanị na-azọpụta ndị ahịa anyị ọtụtụ nde dollar, kama ọ na-ejikwa data iji belata ihe mkpofu ma mee ka usoro ịka akara dịkwuo mma."
Nhazi 2019 Feature Pack 1 dị ugbu a maka ndị ahịa site na ebe nrụọrụ weebụ FTI forming.com.
Aspen Technology na Hexagon kwupụtara Mmekọrịta Ọhụrụ iji Mee Ka Nwee Ngbanwe Dijitalụ na Nhazi Usoro
Ndị ọrụ nwere ike ịmegharị ngwaghari site n'akwụkwọ na-adabere na arụmọrụ dijitalụ, mezue ma arụpụta ọrụ na àgwà nsonaazụ n'oge ndụ.
Aspen Technology, Inc. (NASDAQ: AZPN), na software ụlọ ọrụ akpan owo njikarịcha, na hegzagon mara ọkwa a ọhụrụ larịị nke mmekota dabeere na a memorandum nke Understanding (MoU) na ndị ọzọ anya mmezi ngwọta na-eri ọnu, isi engineering AspenTech na Ntụpụta elo ụlọ na zuru ezu engineering of hegzagon PPM, na-ekwe a workflow kpamkpam lekwasịrị anya data ofụri lifecycle nke akụ.
AspenTech na Hexagon PPM jikọtara ọnụ dị ka ndị mbụ iji zụpụta usoro nhazi di iche iche na usoro injinia, na iji nlezianya akụ na ụba rụọ ọrụ, iji nyere ndị ahịa aka ijikwa ihe ize ndụ ego nke ọrụ dị mgbagwoju anya, nke bụ nnukwu nsogbu taa. Njikọ ndị nwere ike imeziwanye mgbanwe dijitalụ ma mee ka mmejuputa ihe ngwọta kachasị mma nke ndị na-ere ahịa na-eduga.
Na-arụkọ ọrụ ọnụ, AspenTech na Hexagon PPM nwere ike ịnye ejima ejiri jikwaa zuru ezu, nke gụnyere ma ihe akụrụngwa na kemikal na-eme n'ime ahụ ahụ, ka ndị ọrụ ahụ nwee ike ime mkpebi ndị ka mma. ogo na oge nke ọrụ. Software atụmatụ, mmemme na ntụkwasị obi nke AspenTech, tinyere ahụmahụ nke hegzagon PPM maka adọ nke zuru ezu engineering imewe nke ụlọ ọrụ na osisi, ga-enyere rụọ ọzọ mfe enweta engineering ụdị n'oge arụmọrụ, jirichaa laghachi na ntinye ego ha ma kwe ka ha meghachi omume karia ọnọdụ ahịa.
A mara ọkwa ahụ n'oge mmalite okwu nke onyeisi oche PPM Hexagon, Mattias Stenberg, na HxGN LIVE 2019 na Las Vegas, ogbako ogbako nke Hexagon kwa afọ, ebe Antonio Pietri, onyeisi oche na CEO nke Aspen Technology jikọtara ya.
Pietri kwuru, sị: “Mmekọrịta a ga-eme ka ndị ahịa nwee ike iji aka ha họrọ nhọrọ sitere na ndị na-ebute ahịa n'ahịa n'oge ndụ niile, site na usoro ihe atụ ruo na sistemụ na-arụ ọrụ ma na-elekọta. "Firlọ ọrụ injinia, ị nweta ihe na nrụpụta (EPC) na ndị na-arụ ọrụ nwere ike ime ka mgbanwe dijitalụ ha nwee ntụkwasị obi zuru ezu, site na usoro kachasị mma na klas ha."
Stenberg kwuru, sị: «Site na ntule anyị na nkwa anyị na ndị ahịa ọnụ, anyị nwere obi ike na enwere ike imetụta arụmọrụ yana arụmọrụ oru ngo. Alhazi atụmatụ oru ngo na mkpebi dị na mbido usoro a na -ebelata mmefu ego na ihe mmemme. "Mgbe ọrụ a gasịrị, ngwakọta nke mmezi amụma na njikwa elu na ụzọ anyị si ejikwa njikwa ozi anyị na-asụgharị n'ime ahịhịa dị elu nke ga-arụ ọrụ kacha mma na ndụ ha niile."
Ndị ahịa na-akwado ụdị ihe ọhụrụ a:
"Eni na-elepụ anya na mmalite dị ka nke dị n'etiti Hexagon PPM na AspenTech," Arturo Bellezza, onye njikwa injinia kwuru na Eni kwuru. «Nsonaazụ nsonaazụ n'etiti simulation nke usoro, usoro 3D na arụmọrụ ga-enye ohere inwe ọganihu dị ukwuu na njem dijitalụ nke ụlọ ọrụ anyị.
Hexagon na-ebunye Pọtụfoliyo OnCall HxGN iji mee ka nlekota nchedo ọha na eze na nzaghachi
Ha kwalitere Hexagon HxGN OnCall, ngalaba nke nchekwa nchekwa ọha na eze dị iche iche nke na-eji ohere nyocha data oge emezi iji melite mmata arụmọrụ, mụbaa arụmọrụ na ebuli ihe onwunwe.
OnCall HxGN Pọtụfoliyo anọ mejupụtara tent nke ngwaahịa na ike ga-gbapụ ọnụ ma ọ bụ onwe ha: Office, Analysis, na Planning na-aza Records. N'okọta, Pọtụfoliyo na-enye otu eziokwu dị iche iche nke eziokwu iji mee ka nzaghachi ngwa ngwa ma hụ obodo dị nchebe. HxGN OnCall bụ naanị zuru Pọtụfoliyo nke ọha nchekwa kere na domain nka na niile etoju nke mberede ọrụ na ọnụ ọgụgụ applicability: uwe ojii, ọkụ, EMS, obodo nchedo, rụọ nke isi akụrụngwa, ókè-ala na omenala, n'akụkụ ụzọ aka na ndị ọzọ
"Hexagon na-akpụzi ọdịnihu nke nchekwa ọha site na ịhapụ ụlọ ọrụ ka ha bụrụ ndị na-eme ka ihe ka njọ ma na-aza ajụjụ," ka o kwuru. Ola Rollén, Onye isi ala na Onye isi ala nke Hexagon. "HxGN OnCall na-etinye data ahụ iji nye njikọta ọnụ, imekọ ihe ọnụ na ọgụgụ isi maka obodo na-enweghị nsogbu na mba nwere ike idozi."
Ikike ya nke a ga-etinye n'ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ na n'igwe ojii, na-enye ohere ka ụlọ ọrụ dị iche iche nwekwuo ihe omume, meziwanye nsonaazụ ma mebie ihe ize ndụ dị na ya. N'iwu ihe dị ka iri afọ atọ nke ahụmahụ na-eduzi ụlọ ọrụ, HxGN OnCall gụnyere IoT, agagharị, nchịkọta na ígwé ojii iji weta ọgbọ na-esote nchebe ọha na eze na ụlọ ọrụ gburugburu ụwa. Ike ya kwadoro data na-abata na oku, gụnyere SMS, ozi ngwa ngwa na vidiyo, na-eme ka ụmụ amaala bịaruo ndị nwe obodo ha iji nweta ozi ga-echekwa ndụ ha site na ntanetị nkwurịta okwu ọ bụla.
Mpaghara nke Gecasd V2019 na-ekpuchi ya
Mpaghara Hexagon Geospatial nke oru ulo oru Luciad V2019 na HxGN LIVE 2019, ogbako ogbako Hexagon.
N'akwụkwọ akụkọ Luciad, Hexagon na-enye usoro nhazi nke ihe ọmụma maka ọnọdụ na ebe ọgụgụ isi na oge. Nkwalite Luciad na 2019 na-achọ imebi data silos, iji nyere òtù dị iche iche, obodo na mba aka ịghọta nke ọma na njikọ nke ụwa nke oge a na-emetụta mgbanwe ndị na-eme gburugburu ha.
"Luciad V2019 ga-ekwe ka ndị otu maara ihe, saịtị, obodo na mba dị iche iche, jiri ohere dị mma dị ka ọnọdụ smart, wee mepụta njikọ ndị dị mkpa iji chụpụ mkpebi na-eme mkpebi oge," ka Mladen Stojic, Onye isi nke Ngalaba Geospatial kwuru. site na Hexagon. “Otu ikpo okwu dị ka nke a, nke dị na ntughari nke geospatial, arụmọrụ yana anya a chọrọ, dị mkpa maka ndị otu ụwa niile na-achịkwa iju mmiri data data IoT, nke a ga-elerịrị anya iji kwalite arụmọrụ na ihe ịga nke ọma. ozi ».
Site na nkwado ziri ezi maka JavaFX, ngwugwu a na-eme ugbu a nke LuciadLightspeed, na-enye ohere ịmepụta njirimara ọrụ ndị dị ike, ka ị na-eji ike GPU arụ ọrụ zuru ezu. Ma LuciadLightspeed na LuciadFusion dakọtara na OpenJDK, nakwa dị ka ndị ọhụrụ arụmọrụ Mebere Java. Ndị ọrụ nwere ike ịmepụta data data na akpaghị aka na RESTful API na nchịkọta ihe nkesa LuciadFusion ma ọ bụ ịmepụta LuciadFusion Studio ha ahaziri maka nchịkọta njikwa mmekọrịta dị mfe karị.
Version Luciad V2019-awade emelitere atụmatụ maka mobile na nchọgharị ma LuciadMobile ka LuciadRIA na-dakọtara na ọhụrụ mkpa na-agbachitere na ụgbọelu, si agha rịturu ka airspace atụmatụ na ígwé ojii, na ndị nke ọhụrụ ụkpụrụ , dika MS2525, MGCP na AIXM. Nke a na-eme ka Luciad naanị ngwaahịa Pọtụfoliyo na ndị ụlọ ọrụ na-enye a na-agbanwe agbanwe symbology support niile ya na ngwaahịa.
Mwepụta ahụ ga-agụnye ngwaahịa ọhụrụ a na-akpọ LuciadCPillar, nke bụ mmeghachi omume Hexagon na ịrị elu na-arịwanye elu nke API maka ọrụ C ++ / C #.
Maka ama ndi ozo banyere Luciad V2019, nleta https://www.hexagongeospatial.com/products/luciad-portfolio
Mpaghara nke Hexagon nke geospatial na-enye M.App Enterprise 2019
Ngalaba Geospatial Division nke Hexagon, kwalitero ya .App Enterprise 2019 na HxGN LIVE 2019, ogbako dijitalụ nke Hexagon. Nke a kachasị ọhụrụ nke M.App Enterprise, na-ejikọta ike nke Pọpoli Luciad Hexagon iji melite nlele, nyocha na njikwa data.
Ezigbo maka nlekota akụ, nyochaa mgbanwe na-eme ihe n'elu ikpo okwu M.App Enterprise bụ a onwe ngwọta na-enyere òtù idokwa Smart hegzagon M.Apps na-agwa ha azụmahịa nsogbu dynamically dabeere na ọnọdụ. New atụmatụ nke M.App Enterprise 2019 tọọ ntọala maka ọrụ na-enweta na a smart digital eziokwu 5D, ebe data jikọọ were were site convergence nke ụwa nkịtị na digital na ọgụgụ isi na-ike n'ime niile Filiks .
"Mmezi ụlọ ọrụ M.App dị mma na-arụ ọrụ ugbu a na teknụzụ anyị nke Luciad, nke na-enye ndị ọrụ ohere ịnweta ụwa abụọ kachasị mma, mgbe a bịara n'ịhụ anya na nyocha data dị elu iji kwurịta ozi n'enweghị ike na oge," Georg kwuru. Hammerer Onye Nchịkwa Teknụzụ - Ngwa maka Hexagon geospatial nkewa. "Usoro ikpo okwu a jikọtara ọnụ geospatial jikọtara ọnụ ugbu a na-enye ndị ọrụ na ndị mmekọ ohere ịmepụta ngwọta kwụ ọtọ maka ahịa na mpaghara ụlọ ọrụ ha."
Mwepụta nke Portfolio Luciad ga-ekwe ka ndị ọrụ jikọọ, jiri anya nke uche hụ na nyocha data na Smart M.Apps na 3D. Ugbu a, ọ na-egosipụtakwa àgwà nke ala ahụ n'ụzọ dị mma, dabere na data elu nke mpaghara ahụ. Iji kpuchie nnukwu ebe ugwu na mkpebi dị elu, M.App Enterprise 2019 na-enye ndị ọrụ ohere ijikọta ihe mkpuchi elu nke LuciadFusion nyere. Tụkwasị na nke ahụ, ntinye nke nhazi algọridim na ohere nke interface Spatial Workshop na-enye ohere ka SonyApp Enterprise mee nchọpụta dịpụrụ adịpụ nke dị na muta ngwa ngwa -Machine Learning.
Maka ozi ndi ozo banyere M.App Enterprise, gaa na nleta https://www.hexagongeospatial.com/products/smart-mapp/mappenterprise.
Hexagon na-ewepụta ihe ngwọta iji chọpụta ike ọgwụgwụ na ihe ndọpụ uche na ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè
Hexagon AB HxGN MineProtect Operator Alertness System Light Vehicle (OAS-LV), ngalaba nchọpụta ike ma na-adọpụ uche, nke na-ejikwa njikwa nke onye na-ahụ maka ọrụ n'ime ụlọ nke ugbo ala, ụgbọ ala na ọkara trailers.
OAS-LV hegzagon kọwakwuru Pọtụfoliyo nke nche ngwọta maka rụọ, na-ejuputa a ọdịiche iji chebe rụọ nke ìhè ugbo ala, zere ụra na wheel, ikukota ma ọ bụ nwere ihe ndị ọzọ yiri ike ọgwụgwụ ma ọ bụ ihe ndọpụ uche merenụ. Ngwaahịa a dabeere na teknụzụ eji na HxGN MineProtect Operator Alertness System Heavy Vehicle (OAS-HV) - Okpokoro Udiri Mkpuchi Alert System, nke na-echebe ndị ọrụ ụgbọ ala.
"Ike ọgwụgwụ nke onye ọrụ na ndọpụ uche na -emeghachi ihe egwu n'ihe omume dịka Ngwuputa na ụlọ ọrụ ndị ọzọ," Ola Rollén, onye isi ala na Onye isi nke Hexagon kwuru. "OAS-LV bụ mgbakwunye bara uru na ụlọ ọrụ nchekwa MineProtect na-eduzi ahịa na ihe akaebe ọzọ na Hexagon, dị ka ndị ahịa ya, ji nchekwa kpọrọ ihe."
Ngwa dị mfe na-arụ ọrụ na cab na-enyocha ihu onye ọrụ ahụ iji chọpụta ihe ọ bụla nke ike ọgwụgwụ ma ọ bụ ihe ndọpụpụ, dị ka microsleep. A akpaka ịmụta algorithm -ngwa igwe, na-eji uru data analysis ndị a akọwa ma ọ bụrụ na a ghaghị ịrụ ọrụ njikere ma ọ bụ. OAS-LV na-arụ ọrụ na ìhè na ọnọdụ ọchịchịrị, na site na anya anya na / ma ọ bụ ugogbe anya maka anwụ.
A na-ejikọta ihe ngwaike dị na cab, ejikwa igwe ojii zigara igwe ojii ma ọ bụ na ebe nlekota ọhụụ. Nke a na-enye ohere ịnweta ọkwa na oge, ka ndị nlekọta na ndị na-achịkwa nwere ike itinye usoro nkwekọrịta ahụ ma kwe ka nyocha ọzọ. OAS-LV bụ otu n'ime ọtụtụ ngwọta ọhụrụ ndị a na-enye n'izu a HxGN LIVE 2019, Nkwukọrịta teknụzụ nke Hexagon kwa afọ.
Hexagon gbanwere nchọpụta nke ọrụ ụgbọ ala na ngwọta radar ọhụrụ nke ịbanye n'ime ala
Hexagon AB na-enye Leica DSX, ihe ngwọta na-amịpụta ala (GPR) nke dị mkpirikpi, maka nchọpụta nke ụlọ ọrụ ọha na eze. Ezubere iji mee ka data jide ma rụọ ọrụ nhazi data, DSX na-enye ndị ọrụ ohere ịchọta ngwa ngwa, depụta ma jiri anya nke uche hụ ụlọ ọrụ dị n'okpuru ala n'enweghị ihe ọ bụla na ịdabere na ọnọdụ kachasị elu.
"Anyị mere Leica DSX maka ndị ọrụ nwere obere ihe ọmụma banyere GPR ndị chọrọ ịchọta, zere ma ọ bụ maapụ ọrụ nzuzo n'okpuruala n'ụzọ dị mfe, ngwa ngwa ma nwee ntụkwasị obi," ka Ola Rollén, onye isi ala na CEO nke Hexagon kwuru. "Site na nchọpụta ngwa ọrụ a, Hexagon na-eweta teknụzụ GPR n'akụkụ ndị ọrụ ọhụụ iji kwe ka arụ ọrụ nchekwa na ọrụ ọ bụla chọrọ mmụba."
Akụkụ nke na-akọwa DSX bụ software ya, DXplore, nke sụgharịrị nsụgharị njikọ ya n'ime nsonaazụ na-adị mfe iji rụọ ọrụ. N'adịghị ka ngwọta GPR ndị ọzọ, ndị ọrụ adịghị mkpa inwe ahụmịhe n'ịkọwapụta radar data na hyperbolas. DXplore jiri algorithm nwere ọgụgụ isi iji kesaa map nke ihe eji eme ihe di iche iche na nkeji, na-egosi nchoputa a chọtara mgbe ndi oru ka no n'ime ubi. A pụkwara ịpụgaa map ahụ na Leica DX Manager Mapping, Leica ConX ma ọ bụ ndị ọzọ na-arụzi ọrụ maka iji eme ihe na igwe, ma ọ bụ iji kpuchie data ndị ọzọ.
Hexagon na-agbasa usoro ntọala Leica BLK, na-agbanwe mgbanwe nke eziokwu maka ihe onwunwe, nchebe na ngwa ngwa
Hexagon AB mere ntinye ọhụụ ọhụrụ na usoro Leica BLK. Na Leica BLK2GO bụ nke kacha nta na nke kachasị arụmọrụ nke nwere ike ịnweta ngwa nyocha na ụlọ ọrụ, na Leica BLK247 ihe mbụ laser scanning laser 3D maka nchedo nchedo nke na-elegide anya oge 24 nke ụbọchị, ụbọchị 7 nke izu.
"Mgbatị nke usoro BLK na-aga n'ihu na XxX afọ nke Hexagon na-elekwasị anya na-agbagharị agbagha ijide eziokwu," Ola Rollén, onye isi ala na Onye isi oche nke Hexagon kwuru. “Ndị sensọ a abụghị naanị ihe ọhụrụ maka ikike ọrụ ha, kamakwa maka ịdịmma ha. Enwere ike iburu Leica BLK20GO ebe ọ bụla, na Leica BLK2 adịghị ehi ụra «.
Leica BLK2GO na-enye njem nke ọhụụ na-ahụtụbeghị mgbe ọ bụla ka ọ na-ahụ ihe dị n'ime ime. Ngwa nyocha laser na-ejikọta ihuenyo, LiDAR na teknụzụ kọntaktị na-arụ ọrụ ka iṅomi na 3D ka ị na-agagharị, na-ekwe ka ndị ọrụ bụrụ ndị ọzọ dị mma na ịrụ ọrụ nke ọma n'iji ihe na oghere. BLK2GO nwere ngwa dịgasị iche iche, site na iji mmegharị na-emegharị ọrụ na ụlọ ọrụ na imepụta ihe, iji mee nchọpụta, nyochaa na VFX arụ ọrụ maka mgbasa ozi na ntụrụndụ.
Ejiri Leiki BLK247 mepụtara maka njide nke eziokwu na 3D, na-agbasawanye ikike maka ngwa nchedo. Onye ihe mmetụta ahụ na-eme ka a mata ọnọdụ ahụ n'oge dị adị, site na njikwa ọnụ ọgụgụ na mgbanwe nkà na ụzụ nke LiDAR nyere. Site na iji ọgụgụ isi mee ihe, BLK247 nwere ike ịiche ọdịiche dị n'etiti onye na-eje ije ma na-ahapụ ihe akpa akwa, ma chọpụta egwu nchebe iji nye ncheta na oge, maka atụ anya na mgbanwe ndị a na-atụghị anya ya. BLK247 na-emeziwanye ihe ọmụma banyere ọnọdụ ahụ n'ime oghere ma ọ bụ nchebe dị elu, na-ewepụ mkpa ọ dị ka ndị mmadụ na-eleba anya mgbidi nke nchebe nchebe ma ọ bụ ogwe ụlọ ọrụ nwere ọgụgụ isi.
Nkewa ekeji nke Hexagon na-agbakwụnye M.App Enterprise na M.App X maka usoro mmụta
Ngalaba Hexagon Geospatial ga-eme ka ya na ngwa ngwa AppoAppi na Ms.App X dị site na mmemme Ọmụmụ ihe zuru ụwa ọnụ malite na 11 June nke 2019. Ihe mgbakwunye a ga-enye ụmụ akwụkwọ ahụ ohere ịnweta mmepe ka mma na mmejuputa ngwa ngwa nke geospatial, nke ga-enye ha ohere ịzụ ahịa na ahịa ahịa.
"Ka ụlọ ọrụ geospatial na-aga n'ihu na ngwa azụmaahịa sitere na igwe ojii, ọ dị anyị mkpa ịkwadebe mahadum na ngwaọrụ kwesịrị ekwesị iji kwadebe ụmụ akwụkwọ maka ọdịnihu," Mike Lane, Onye isi nchịkwa zuru ụwa ọnụ nke Hexagon Geospatial Division kwuru. ".
M.App Enterprise na M.App X na-enye ohere ka mahadum jiri ohere teknụzụ azụmahịa Hexagon kụziere ụmụ akwụkwọ otu esi eji data geospatial ma dozie nsogbu ụwa n'ezie. M.App Enterprise bụ mpaghara mpaghara maka ịchekwa na ịchekwa Hexagon Smart M.Apps: ngwa ndị na - ejikọta ọdịnaya, ọrụ ọrụ na geoprocessing na echiche mmekọrịta na ike nyocha..
M.App X bụ nyocha nyocha nyocha nke na-adabere na ígwé ojii, iji kee ngwaahịa na akụkọ sitere na ihe oyiyi, gosipụtara na nhazi azụmahịa.
"Site na imepụta ngwa ọdịnala na M.App Enterprise, ụmụ akwụkwọ nwere ike ịmụta otu esi ejikọta ụdị data dị iche iche dabere na njikwa ike nyocha nke oge," Lane kwuru. “Site na iji M.App X, ụmụ akwụkwọ na-achọ ọrụ na ọgụgụ isi nke geospatial (GEOINT) na ngalaba ndị ọzọ metụtara ha ga-amụta nkà ọgụgụ isi dị mgbagwoju anya ma nweta ihe ọmụma dị mkpa iji mepụta, jikwaa ma nyefee data nke na-enye ohere njikọta, nyocha na njị. nke ozi geospatial. . Obi di anyi ezigbo uto inye ndi oru izizi a “.
Agụmakwụkwọ Agụmakwụkwọ ga-enye ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ ọnụ ọgụgụ dị ụba maka ụdị ọzụzụ ha, ihe atụ, vidiyo na ihe ndị ọzọ, iji mee ihe mgbe ha na-amụta ma na-arụ ọrụ na M.App Enterprise na M.App X.
Maka ama ndi ozo gbasara itinye aka na Ms. Enterprise na M.App X n'ime usoro ihe omumu nke ndi otu mahadum, nleta https://go.hexagongeospatial.com/contact-education-programs.
Previous Post«Previous LandViewer - Nchọpụta mgbanwe na-arụ ọrụ na ihe nchọgharị ahụ
Next Post Usoro ETABS maka Nhazi Injin - Ọkwa 2Next »